Maxaa Ka Taqaana Diyaaradda Loo Yaqaan”Maalinta Qiyaamaha”?Waa Diya….. | Xaqiiqonews
Maxaa Ka Taqaana Diyaaradda Loo Yaqaan”Maalinta Qiyaamaha”?Waa Diya…..
Meel kasto oo ay tagto diyaaradda sidda madaxweynaha Mareykanka waxaa barbar socdo diyaarad kale oo nooceedu yahay Boeing E-4A aircraft. diyaaraddaasi oo caan ku ah magaca”maalinta qiyaame” waxa ayna qeyb ka tahay diyaaradaha ilaaliya madaxweynaha Mareykanka.
Sida lagu daabacay Warbixin uu qoray Wargeyska Daily Mail, Xaqiiqonews-na ay af-soomaali u tarjuntay, waxaa jira afar diyaaradooda oo noocoodu yahay ‘Night Watch” oo ah diyaaradaha Boeing 747 oo ah diyaaraha wehliya xilliga madaxweynaha Mareykanka uu ku jiro safaradiisa xagga dibadda ah.
Diyaaradahan ayaa ah kuwa loo diyaariyey in ay noqon karaan goob laga xakumi karo dalka Mareykanka hadii uu dalka wajaho weerar nukliyeer ah.
diyaaraddani ayaa awood u leh in ay hawada ku jirto waqti badan wax ayna shidaal la,aan ku sii jiri kartaa hawada muddo 35.4 saacadood.
Ciidamada cirka Mareykanka ayaa soo bandgigay muuqaal heer sare ah oo muujinaya dhoola tus ku saabsan diyaarad cusub oo laagu tala galay in ay ka mid noqoto ilaalada maxweynaha diyaaraddaasi oo caan ku ah magaca “DOMESDAY) oo micnaheedu yahay“maalinta qiyaame”.
U jeedada ugu weyn ee diyaaraddani ayaa lagu sheegay waxaa uu Mareykanku ugu yeeray diyaar-garowka dhamaadka aduunka! madaama diyaaraddani ay dul qaad u leedahay sida Ameerikaanku ku doodaayo weerarada nukliyeerka iyo sidoo kale in ay iska difaacdo hadii uu cirka ka soo dhaco Neyaasik.
Diyaaradda ayaa ku qalabeysan aaladaha ka hortagga korontada waana kuwa diyaar garow ku jira 24-saac iyo sidoo kale 365-ka maalin ee sanadku ka goobanyahay.
Mareykanka ayaa aaminsan i diyaaradahan ay yihiin kuwa ugu fiican ee ilaalin kara amaanka madaxweynaha madaama dalku uu wajahaayo cabsi xooggan oo xagga amniga waxaana laga cabsi qabaa in uu dalka ka dhaco weerar nukliyeer ah.